Uhlelo lwezilimi ezimbili - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Funda izilimi ezimbili
Uhlelo Lwezilimi EzimbiliFunda isiNgisi nesiFulentshi
Uhlelo Lwezilimi EzimbiliIsiFulentshi nesiNgisi
Uhlelo lwe-BLI ngezilimi ezimbili kukunikeza ithuba lokufunda, ukubukeza kanye nokwenza zonke izici zokufunda ulimi, ukumboza wonke amakhono amane (ukufunda, ukubhala, ukukhuluma nokulalela), uhlelo lolimi nolwazimagama sobabili lwesiFulentshi nesiNgisi. Uhlelo lwezilimi ezimbili luqukethe amakilasi aseFrance ekuseni namakilasi esiNgisi ntambama. Le ndlela iyaxhumana futhi igxile kubafundi futhi amakilasi anamandla futhi ayabandakanyeka.
Ubuncane bamaviki 1
Uzothatha amakilasi aseFrance ekuseni (9 - 14:05) namakilasi esiNgisi ntambama (14:05 - 17:50). Lolu hlelo uhlelo oluhle kakhulu.
Isifundo esingu-1 = imizuzu engama-50
IsiNgisi: Phansi maphakathi kuya ku-advanced
Abafundi abathatha isifundo kufanele babe ngaphezulu kwenqanaba lesiNgisi lesiPhakathi. Uma umfundi engahlangabezani nezinga elidingekayo ukuze angeniswe ohlelweni lwezilimi ezimbili, kufanele athathe amakilasi ethu ejwayelekile aze afike ezingeni eliphakathi.
Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane mayelana nentengo yethu yokuphromotha.
Uma udinga indawo yokuhlala ngesikhathi uthatha uhlelo lwakho, izindlela zokuhlala nokuhlala ekhaya ziyatholakala. Sicela uxhumane nomnyango wethu wezindlu.
Ikhaya kude nasekhaya Ukuhlala nomndeni owamukelayo kuyindlela enhle neyingqayizivele yokuntywila emasikweni nasezilimini zaseCanada, ngoba kukuvumela ukuthi uphile isipiliyoni somndeni.
Yonke imindeni yethu ibamba ngokukhethwa ngokucophelela futhi kufanele ihlangabezane nenqubo yekhwalithi ye-BLI. Siqinisekisa ukuthi zonke izindlu zemikhaya ezihlangabezana nezinga lokuphepha nezempilo. Yonke imindeni ye-BLI yekhaya ihlala kude nebanga lesikole.
Ibhodi eligcwele (ukudla okungu-3 ngosuku)
Uhhafu webhodi (izidlo ezi-2 ngosuku)
Indawo yokudlela (akukho ukudla ngosuku)
Indawo yokuhlala inketho yabafundi abajabulela ukuzimela nobumfihlo bokuzihlalela. Uzoba negumbi langasese noma elabiwe, ngokwesicelo sakho esithile. Izikhungo zekhishi nezokuwasha zizokwabelana nabanye abafundi. Indawo yokuhlala yethu yabafundi itholakala imizuzu eyi-10 ukusuka kwikhampasi yethu yaseMontreal.
Isimo sokuzivocavoca kobuciko esivulekile 24/7
Igumbi lokuhlanza $ $
Uma ufuna enye into ngaphandle kwendabuko yekhaya noma isipiliyoni sokuhlala kwabafundi, sinezinketho eziningi ezahlukahlukene kuwe, kufaka phakathi amafulethi anezindlu nama-studio. Ifulethi lethu elinamagumbi atholakala imizuzu engama-20 ukusuka kwikhampasi yethu enkulu.
9:00 - 5:50 PM
Izifundo ze-42 ngesontoBilingual
Thuthukisa ulwazi lwakho ngamakhono esiNgisi nawaseFrance ngokuthuthukiswa kwamaphrojekthi kanye nokufunda okusekwe emsebenzini. Prakthiza amakhono akho okubhala, uthuthukise amakhono akho okulalela, uthuthukise amakhono akho okufunda.
I-FSL yokuxhumana kwezokuxhumana
Amakhono wamandla ESL
Izinhlelo Ezijwayelekile ze-ESL neze-FSLIncazelo yeklasi
Kuleli bhulokhi lamakilasi abafundi bazofunda yonke imiqondo yohlelo lolimi edingekayo ukuthuthukisa ukunemba kwabo, ukushelela nokuqonda kwabo ezingeni lesiFrentshi. Lesi yisigaba esisebenzisanayo lapho abafundi benethuba lokusebenzisa uhlelo lolimi futhi bafunde ngemithetho ngokutholakala, ngokuholwa nguthisha nangezincazelo ezithile ezicacile. Kugcizelelwa ngokwengeziwe ukukwazi ukuxhumana usebenzisa iphuzu lolimi, yingakho kunamathuba amaningi kakhulu okuzijwayeza nokwenza ngcono. Abafundi bazokwazi ukuqhuba amakhono olimi ama-4 (ukulalela, ukukhuluma, ukufunda nokubhala) endaweni ehlanganisiwe. Izihloko zezigaba ezahlukahlukene zezifundo ezifanele ngokusebenzisa amasu wokufunda ahlukile akhuthaza ukuxhumana endaweni yangempela yomhlaba. Abafundi bathuthukisa amakhono abo olimi ngokusebenzisa incwadi yezifundo nangokuhlanganyela emisebenzini eminingi ehlukahlukene ukubasiza bafunde futhi bathuthuke.
Le mfundo yenza imisebenzi eyisisekelo yesiFulentshi futhi ihlelwe eduze nezindikimba ezenzelwe ukuthuthukisa amakhono emvelo okuxhumana nsuku zonke. Inhloso kuleli klasi ukuthuthukisa ukushelela. Kukhona kugxilwe ekukhulumeni nasekusebenzisaneni phakathi kwabafundi ukuze bakwazi ukusebenzisa lokho abakufundile emakilasini abo adlule. Isigaba siyasebenzisana futhi sikhuthaza ukusebenza kweqembu neqembu ukuze kufezeke inhloso yokuxhumana njengesipikha somdabu futhi siphonsela inselelo abafundi ngemisebenzi nemisebenzi esekwe yiprojekthi efana nokudlala indima, izingxoxo, ingxoxo, ukulandisa izindaba, imidlalo yokuxhumana nabanye noma yamagama amaphrojekthi amancane.
Lesi sigaba senzelwe ukukusiza ukusheshisa inqubo yakho yokufunda ngenkathi kukuvumela ithuba lokukhetha izifundo ezisuselwa kuzintshisakalo zakho ezithile nezidingo zakho. Njalo ngeseshini sinikeza inkambo ye-French ekhethekile enesihloko esithile noma ukugxila okuphakathi, njengesiNgisi / nesiFulentshi emafilimini nasemculweni. Ngoba kunabafundi abambalwa kuleli klasi, ukunakwa okukodwa okuvela kumfundisi.